‘फिल्म क्षेत्रमा आफ्नालाई च्यापिन्छ, अरु डिप्रेशनमा नगएर के गर्नु’ ? : नम्रता सापकोटा – Narayani Dainik
‘फिल्म क्षेत्रमा आफ्नालाई च्यापिन्छ, अरु डिप्रेशनमा नगएर के गर्नु’ ? : नम्रता सापकोटा
यतिबेला सुशान्तको निधनको खबरले पुरा बलिउड नै स्तब्ध छ । बलिउडमा मात्र नभएर नेपाली चलचित्र जगतमा पनि यसको चर्चा भैरहेको छ । यसैबिच नायिका नम्रता सापकोटाले सामाजिक सञ्जालमा भिडियो पोष्ट गर्दै सुशान्तको निधनबारे आफ्नो विचार प्रकट गरेकी छिन् ।
उनले भनेकी छिन्–‘बलिउडको किन कुरा गर्नुपर्यो, सबै त म भन्दिन तर हाम्रो क्षेत्रमा नै अधिकांश यस्तो उदाहरण छ । कलाकारितालाई भन्दा पनि आफ्नोलाई बढी साथ दिने चलन छ । कलाकार चाहियो भनेर घोषणा गरिन्छ, तर अन्त्यमा आफ्नै छोराछोरी, भजिता–भतिजीलाई नै लिएर काम गरिन्छ ।’
उनले बाबुले चलचित्र बनाउने अनी छोराले महंगो पारिश्रमिक लियो भनेर हल्ला फिजाइने गरिएको पनि उल्लेख गरेकी छिन् । नम्रता अगाडि भन्छिन्–‘यहाँ मैले मिहिनेत गरेको छु भनेर केही नै हुँदैन । जसको राम्रो पकड छ, अभिनय जिरो भएपनि जसले व्यापार दिन सक्छ उसैले यहाँ काम पाउँछ । वास्तविक कलाकारको त यहाँ काम नै छैन । कसैले पनि वास्तविक कलाकारलाई यहाँ गन्दैन । म कलाकार भएर भन्दा गलत सोचिएला तर मैले मात्र होइन धेरैले यही महशुश गर्नुभएको छ ।’
नम्रताको कुरामा धेरैले समर्थन गरेका छन् । नेपालमा मात्र नभएर भारतमा पनि यहि कुराले अहिले चर्चा पाएको छ । सुशान्तका फ्यानले पनि सुशान्तलाई बलिउडले राम्रो स्थान नदिएर नै उनले यस्तो कदम उठाएको बताइरहेका छन् ।
कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या २० पुग्‍यो
हिमानी शाह र पारस शाहको यसरी भयो पुनर्मिलन